iTunes Qhagamshela iya kuvala iiyure ezisi-8 ngo-Epreli 22 | Ndisuka mac
Kubonakala ngathi iApple inesondlo kwi-dos ecwangciselwe yona iTunes Qhagamshela ngo-Epreli 22 ukuqala nge-7: 00 am (PDT), ke zonke iinkonzo ezinxulumene noko azizukufumaneka malunga neeyure ezisi-8 ukusuka kwixesha lokuvala. Eli ayisosihlandlo sokuqala ukuba iApple yenze olu hlobo lokuvalwa kwesondlo, kodwa kuyinyani ukuba ayisiyonto iqhelekileyo ngaphandle kweentsuku ezimiselweyo zeholide ezinje ngeKrisimesi okanye izinto ezinje. Ngayiphi na imeko, inkampani iyasazisa malunga nokuvalwa ngoMgqibelo, nge-22 ka-Epreli.
Bonke abaphuhlisi bayalumkiswa malunga nokuvalwa ngokuthumela i-imeyile ekwazisa imeko. Oku kubangela abaphuhlisi abanakho ukuhlaziya okanye ukuguqula usetyenziso lwabo ukusukela ngexesha lokuvalwa kokuvulwa kwenkonzo kwaye kufuneka ulumke ungabanjwa ngohlaziyo okanye into efana naleyo ngexesha kunye nomhla obonisiweyo. Ezi nkonzo zilandelayo ziya kuchaphazeleka:
Layisha isicelo sokuqokelela kwiXcode
Umlayishi wesicelo kunye nealtool
iTunes Qhagamshela iselfowuni
Umvelisi we iTunes
Ke sonke siyalumkiswa ukuba ngexesha eli xesha lokugcina eliya kuhlala kule meko malunga neeyure ezisi-8, Abaphuhlisi abayi kuba nakho ukubonisa umxholo omtsha okanye benze utshintsho kumxholo okhoyo, ke kuya kufuneka uqiniseke ukuba yonke into ilungile kwiiyure ngaphambi komhla wokuvala ukunqanda iingxaki zalo naluphi na uhlobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-iTunes Connect iya kuvalwa iiyure ezisi-8 ngo-Epreli 22
Uhlaziyo luka-Apple lokuGqibela Pro Pro kunye neMovie yeMac